मुलढोका वरपर यस्ता वस्तु राख्नुभयो भने बुझ्नुस् तपाईको दुर्भाग्य सुरु भयो | Rajmarga
मुलढोका वरपर यस्ता वस्तु राख्नुभयो भने बुझ्नुस् तपाईको दुर्भाग्य सुरु भयो
ढोका वरपर यस्ता वस्तु राख्नबाट बच्नु आवश्यक छ, जुन भाग्यका लागि बाधक हुने गर्दछ । शास्त्रका अनुसार देवीदेवताको कृपा चाहिएको छ भने ढोकाको पवित्रतामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ, किनभने ढोकाबाटै सकारात्मक ऊर्जा र देवकृपा घरभित्र प्रवेश गर्दछ । उहाँ उज्जैनका ज्योतिषाचार्य मनीष शर्माअनुसार यस्ता तीन कुरा छन्, जसका कारण भाग्यको साथ प्राप्त हुन सक्दैन ।
घरको मुख्य ढोकामा काँडेदार विरुवा राख्नु हुँदैन । यस्ता विरुवामा नकारात्मक ऊर्जाको बास हुने गर्दछ । यदि यस्ता विरुवा ढोकामा राख्नुभयो भने घरमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश हुँदैन । साथै देवीदेवताहरुको कृपा पनि प्राप्त हुँदैन । घरमा प्रवेश गर्ने बेला काँडा पनि बिज्न सक्दछ । त्यसैले मुल ढोका वरपर काँढेदार विरुवा रोप्नु हुँदैन ।
भाँचिएको खाट वा पलङ
अक्सर हामी जब घर प्रवेश गर्दछौ तब प्रवेश गर्ने बित्तिकै बस्नका लागि कुर्सी वा पलङ राख्ने गर्दछौ । यस्तोमा ढोका वरपर भाँचिएका कुर्सी वा पङल राख्नुभयो र त्यसमा बस्नु भयो भने तपाई लड्न पनि सक्नु हुन्छ । त्यसैले ढोका वरपर यस्ता टुटेफुटेका वस्तु राख्नु हुँदैन । यस सम्बन्धमा अर्को एउटा मान्यता पनि छ कि ढोका वरपर टुटेफुटेका पलंग राख्दा घरमा अशान्ति हुने गर्दछ । परिवारमा वादविवाद हुन सक्दछ ।साथै घरमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश पनि हुन सक्दैन ।
अधिकांश रमा जब कुनै वस्तु टुटछ तब त्यसलाई घरमै एकातिर राख्ने गरिन्छ । घरमा टुटेफुटेका भाँडाकुँडा राख्नु हुँदैन । तत्काल घरबाहिर निकाले फाल्नु राम्रो हुन्छ । मुख्य ढोका वरपर टुटेफुटेका भाँडाकुँडा राख्नुभयो भने देवीदेवता त्यो देखेर घरमा प्रवेश गर्दैनन् भन्ने मान्यता पनि छ। घरमा नकारात्मक ऊर्जा पनि बढ्ने गर्दछ । भाग्यसम्बन्धी बाधा हटाउका लागि ढोका वरपर यस्ता राख्नु हुँदैन ।
Previous post: तपाईलाई थाहा छ श्रीमती कति किसिमका हुन्छन् ? ७ प्रकारका श्रीमती मध्ये तपाईकी कुन ?
Next post: हत्या, अपहरण तथा बिष्फोटन कार्यमा संलग्न यादव पक्राउ
तपाईलाई थाहा छ ? स्वास्थ्यका लागि जन्मान्तर कति हुनु राम्रो ?